Fariisiin Shabaab lahaa oo Jilib lagu burburiyay
Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa saaxiibbada la ah ee caalamiga ayaa dhawaan duqeyn ay ka fuliyeen magaalada Jilib waxay ku burburiyeen fariisiin ururka al-Shabaab uu ku qorsheynayay xasuuqa dadweynaha Soomaaliyeed.
Afhayeenka Dowladda Ismaaciil Mukhtaar Cumar ayaa sheegay in duqeyntaas aynan ku dhaawacmanin ama ku dhimanin wax shacab ah. Duqeyntaan ugu dambeysay waxay qeyb ka tahay dadaallada dalkeenna looga saarayo argaggixisada al-Shabaab kuwaasoo dhibaato weyn ku ah shacabka Soomaaliyeed.
"Mid ka mid xarumaha al-Shabaab ay ku qorsheeyaan xasuuqa ummadda Soomaaliyeed ayaa duqeyn lagu burburiyay. Taasi waxay tusineysaa in awooddooda ay wax isaga dhicin karaan ay hoos u dhacday," ayuu yiri afhayeenka dowladda. Wuxuu intaasi ku daray in hal asbuuc gudahiis ay dowladda Soomaaliyeed ay duqeymo dhowr ah ka fuliyeen magaalada Jilib iyo hareeraheeda.
Wuxuu sheegay afhayeenku in duqeymada noocaan ah ay muujinayaan dadaalka joogtada ah ee dowladda Soomaaliyeed ay ku jirto ee lagu wiiqayo awoodda milatari iyo tan dhaqaale ee ururka dilaaga ah ee al-Shabaab. Dowladda Soomaaliyeed iyo dowladaha caalamiga ee caawiyaan dalka Soomaaliyeed waxay sare u qaadeen weerarrada noocaan ah ee lagu burburinayo al-Shabaab.
Xorriyo 1 Views : 10985